विधर्मी: १६ औं शताब्दीमा "लुथरनहरूको खोजी" को एक पूर्ण चित्र | वर्तमान साहित्य
जुआन अर्टिज | 06/11/2021 18:50 | जीवनी, किताबहरु, नोभेला
विधर्मी प्रसिद्ध भल्लाडोलिड लेखक मिगुएल डेलिब्सको पछिल्लो उपन्यास हो। यो स्पेन मा 1998 मा Ediciones Destino द्वारा प्रकाशित भएको थियो। यो ऐतिहासिक विधाको कथा हो जसले 1999 औं शताब्दीमा सर्भान्टेसको भूमिमा "लुथरनहरूको खोजी" को समयमा भएको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो पुस्तक लेखकको सबैभन्दा पूर्ण कार्यहरू मध्ये एक मानिन्छ, जसले उनलाई XNUMX मा राष्ट्रिय कथा पुरस्कार जित्न अनुमति दियो।
मिगुएल डेलिब्सको उत्कृष्ट साहित्यिक क्यारियर थियो, जसको रूपमा बाहिर खडा स्पेनी युद्धपछिको अवधिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपन्यासकारहरू मध्ये एक। यसको व्यापक भण्डारमा 60 भन्दा बढी कामहरू छन्, जसमा उपन्यासहरू, छोटो कथाहरू, निबन्धहरू, यात्रा र शिकार पुस्तकहरू समावेश छन्। उनको सफलता उनको बीस पुरस्कार र मान्यताहरु मा प्रतिबिम्बित छ, साथै फिल्म, थिएटर र टेलिभिजन मा उनको काम को रूपांतर मा।
1 हेरेटिकको सारांश
1.1 Salcedo परिवार
1.2 गर्भधारणको चाहना थियो
1.5 अनाथालयमा पठाइयो
1.6 कठिन समय
1.7 अनाथ र उत्तराधिकारी
1.8 ठूला परिवर्तनहरू
1.9 अप्रत्याशित र क्रूर अन्त्य
3 लेखक, Miguel Delibes को जीवनी सारांश
3.1 साहित्यिक दौड
3.2 व्यक्तिगत जीवन र मृत्यु
3.3 लेखकका उपन्यासहरू
लस साल्सेडोस, डन बर्नार्डो र उनकी पत्नी क्याटालिनाऊनी कपडाहरूसँग तिनीहरूको व्यवसायको लागि धन्यवाद, तिनीहरू राम्रो सामाजिक स्थितिको एक जोडी हुन्। झण्डै आठ वर्षदेखि पैदा गर्ने प्रयास गरेका छन् - असफल- आफ्नो सम्पत्ति र सम्पत्तिको उत्तराधिकारीलाई। चिनजानको सिफारिसमा, तिनीहरू डाक्टर अल्मेनाराकहाँ जान्छन्, जसले, लामो समयको लागि, उनीहरूलाई विभिन्न निषेचन प्रविधिहरूसँग मद्दत गर्दछ।
गर्भधारणको चाहना थियो
विभिन्न प्रकृया अपनाएपनि डोना क्याटालिना गर्भवती हुन सकेनन्, त्यसैले उसले यो विचार छोड्ने निर्णय गर्यो। चाँडै पछि, जब आशाहरू हराए, महिला टेपमा थियो। डन बर्नार्डो समाचार संग धेरै खुसी थिए, किनभने तिनीहरू अन्ततः एक छोराको साथ आशिष् पाए।
अक्टोबर 30, 1517, डोना क्याथरीनले एक स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिए जसलाई तिनीहरूले सिप्रियानोको रूपमा बप्तिस्मा दिए। तर,, आगमन द्वारा उत्पादित खुशी को बावजूद, सबै खुशी थिएन। बच्चा जन्माउने समयमा, महिला डाक्टरहरूले समाधान गर्न नसकेका जटिलताहरू प्रस्तुत गरे र केही दिनमै ऊ मर्यो। श्रीमती साल्सेडोलाई सम्मान र भव्यताका साथ गाडिएको थियो, किनकि यो उनको सामाजिक वर्ग र भिन्नताको व्यक्तिसँग सम्बन्धित थियो।
डन बर्नार्डो आफ्नी पत्नीको मृत्यु पछि विनाश भयो र बच्चालाई अस्वीकार गरे के भयो उसलाई दोषी ठानेको लागि। यति हुँदाहुँदै पनि मानिसले हुनै पर्छ ख्याल राख्नुहोस् नर्स खोज्नुहोस् Cipriano को लागी। यसरी नै भाडाहरू Minervina, एक 15 वर्षीया केटी जसले आफ्नो बच्चा गुमाउनु परेको थियो, त्यसैले उनले बच्चालाई बिना समस्या स्तनपान गराउन सक्षम भइन्।
Minervina उसले केटालाई वर्षौंदेखि बच्चा पाइरहेको थियो, उनको हेरचाह गरे र आमाको माया दिए जुन मलाई चाहिएको थियो। म सानै देखि, सिप्रियानो मिठो र अन्तरदृष्टि थियो, डन बर्नार्डोको लागि नकारात्मक गुणहरू, जसले उसलाई रोक्न खोज्यो। उनका बुबाले उनलाई माया गर्न कुनै प्रयास गरेनन् र समयसँगै त्यो घृणा बदलियो। यो मान्छे को कारण हो यसलाई आन्तरिक बनाउनुहोस् - सजाय को एक मोड को रूप मा - एक अनाथालय मा.
Cipriano को बसाइ होस्टेलमा गाह्रो थियो, त्यहाँ दु:खको सामना गर्नुपर्‍यो दुर्व्यवहारको अतिरिक्त। तर, त्यही ठाउँमा उनले शिक्षित र विविध ज्ञान प्राप्त गरे । ती वर्षहरूमा, उनले युरोपमा क्याथोलिक धर्मको बारेमा पहिलो प्रोटेस्टेन्ट धाराहरू सुनेका थिए। उनले कास्टाइललाई विनाश गर्ने प्लेगका बिरामीहरूको हेरचाह गर्न आफ्ना साथीहरूसँग पनि सहकार्य गरे, जसले हजारौंको मृत्यु भयो।
अनाथ र उत्तराधिकारी
भयानक महामारीले सिप्रियानोलाई नजिकबाट छोयो, देखि आफ्नो बुबा गुमाए प्लेग को हात मा। डन बर्नार्डोको मृत्यु पछि, त्यो जवान मानिसअहिले अनाथ, केवल विरासतमा प्राप्त छ उनको परिवारको सम्पत्ति। चाँडै, उसले व्यवसायको जिम्मा लियो र राम्रो विचारहरू लिएर आयो जसले यसलाई अझ समृद्ध बनायो। उनको नयाँ सिर्जना - छाला-रेखा ज्याकेट - जनसंख्या र बढ्दो बिक्री संग धेरै लोकप्रिय थियो।
जीवन साइप्रियन पर्याप्त सुधार, पनि माया भेटियो अर्को टिओ, एक सुन्दर महिला जससँग उनले विवाह गरे। उनीसँग सँगै, उनले राम्रो समय बिताए। तर, खुसी बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गयो दम्पतीले सन्तान जन्माउन सकेनन्. टिओ यति धेरै पागल भयो कि असंतुलित समाप्त भयो मानसिक y अन्ततः एउटा संस्थामा भर्ना भयो ऊ मर्यो.
अप्रत्याशित र क्रूर अन्त्य
यसले सिप्रियानोको जीवन परिवर्तन गर्‍यो - एक धेरै धार्मिक मानिस - किनभने उसले के भयो भनेर आफैलाई दोषी ठहरायो र उनको बाँकी दिनको लागि एक तपस्या लगाईयो। त्यस बेला देखि, भूमिगत लुथरन समूहहरूसँग भेट्न थाले, जसले होली इन्क्विजिसन बाँच्नको लागि ठूलो विवेकका साथ काम गर्यो।
उनको वास्तविकता परिवर्तन भयो कहिले फिलिप दोस्रो - क्याथोलिक विश्वासी - उनले आफ्नो बुबाको स्थानमा ईसिंहासन, खैर यो सबै विधर्मीहरूको अन्त्य गर्न आदेश दिए अवस्थित राज्यमा. पीछा अथक थियो; त्यस समयका प्रोटेस्टेन्टहरू जो कब्जामा परेका थिए र तिनीहरूको विश्वासलाई इन्कार गरेनन् उनीहरूलाई भयानक भाग्यले पर्खिरहेको थियो। पछि हट्नेहरू बाँच्न सफल भए। यद्यपि, साइप्रियनले आफ्नो सिद्धान्त त्याग्न इन्कार गरे, र अन्तसम्म आफ्नो विश्वासमा दृढ रहे।
द हेरेटिक १६ औं शताब्दीमा कार्लोस वीको शासनकालमा स्पेनको भल्लाडोलिडमा सेट गरिएको उपन्यास हो। यो 424 पृष्ठहरूमा विकसित गरिएको छ जसमा तीन मुख्य भागहरू कुल 17 अध्यायहरूमा विभाजित छन्।। कथानक एक सर्वज्ञ तेस्रो-व्यक्ति कथाकार द्वारा वर्णन गरिएको छ, जसले नायक, सिप्रियानो साल्सेडोको जीवनलाई बताउँछ।
लेखक, Miguel Delibes को जीवनी सारांश
मिगुएल डेलिबेस सेटियन उनको जन्म अक्टोबर १७, १९२० मा स्पेनको भल्लाडोलिड सहरमा भएको थियो। उनका आमाबाबु मारिया सेटिन र प्रोफेसर एडोल्फो डेलिब्स थिए। उनले आफ्नो गृहनगर कोलेजियो डे लास कार्मेलिटासमा प्राथमिक विद्यालय पढे। 16 वर्षको उमेरमा, उनले लुर्डेस स्कूलमा आफ्नो स्नातक पूरा गरे. दुई वर्ष पछी -स्पेन मा गृहयुद्ध सुरु भएपछि-, स्वेच्छाले आर्मी नेवीमा भर्ना भए.
1939 मासशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएपछि, उनी भल्लाडोलिड फर्किए र इन्स्टिच्युट अफ कमर्समा अध्ययन गर्न थाले। आफ्नो डिग्री पूरा गरेपछि, उनले कानून पढ्न कला र शिल्प स्कूलमा भर्ना गरे। एकै समयमा, उनले अखबारका लागि कार्टुनिस्ट र फिल्म समीक्षकको रूपमा काम गरे Castilla को उत्तर। 1942 मा, उहाँ Mercantile Intendant को रूपमा शीर्षक थियो Altos Estudios Mercantiles de Bilbao को केन्द्र मा।
उनले साहित्यिक जगतमा आफ्नो कामबाट दाहिने खुट्टामा सुरुवात गरे साइप्रसको छाया लामो गरीएको छ (1948), उपन्यास जसको लागि उनले नाडाल पुरस्कार प्राप्त गरे। दुई वर्ष पछि, उनले प्रकाशित गरे दिन पनि हो (1949), एउटा काम जसले उनलाई फ्रान्कोवादीहरूद्वारा सेन्सरशिपको सामना गर्यो। यति हुँदाहुँदै पनि लेखक रोकिएनन् । उनको तेस्रो पुस्तक पछि, बाटो (1950), उपन्यास, कथा, निबन्ध र यात्रा लगहरू सहित वार्षिक रूपमा प्रस्तुत कार्यहरू।
फेब्रुअरी १९७३ देखि — र उहाँको मृत्युको दिनसम्म— डेलिब्सले रोयल एकेडेमीको कुर्सी "ई" ओगटे स्पेनिश। एक लेखक को रूप मा आफ्नो व्यापक क्यारियर मा, उहाँले आफ्नो काम को लागि महत्वपूर्ण पुरस्कार, साथ साथै शीर्षक प्राप्त गरे सम्मानित कोसा विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा। तिनीहरू तिनीहरूबाट अलग छन्:
साहित्यका लागि राजकुमार अस्टुरियास पुरस्कार (1982)
कम्प्लुटेन्स युनिभर्सिटी अफ म्याड्रिडबाट डाक्टर सम्मानित कारण (1987)
स्पेनिश पत्रहरूको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार (1991)
मिगुएल डे सर्भान्टेस पुरस्कार (1993)
Castilla y Leon को स्वर्ण पदक (2009)
व्यक्तिगत जीवन र मृत्यु
मिगुएल डेलीब्स प्लेसहोल्डर छवि उनले 23 अप्रिल, 1946 मा एन्जेल्स डे क्यास्ट्रोसँग विवाह गरे, को संग सात सन्तान थिए: मिगुएल, एन्जेल्स, जर्मन, एलिसा, जुआन डोमिङ्गो, एडोल्फो र क्यामिनो। 1974 मा, उनकी पत्नीको मृत्युले उनको जीवनमा पहिले र पछि चिन्ह लगाइयो, त्यसैले उनले आफ्नो प्रकाशनको गतिलाई सुस्त बनायो। मार्च ,१, २००२लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित उनको निवासमा मृत्यु भयो en Valladolid.
2007 को अनुसार, लेखकको 87 औं जन्मदिनको लागि, प्रकाशन गृहहरू डेस्टिनो र सर्कुलो डे लेक्टोरेसले सातवटा पुस्तकहरू प्रकाशित गरे जसले उहाँका कामहरू संकलन गरे। यी हुन्:
स्मारिका र यात्रा (2007)
पत्रकार । निबन्धकार (2010)
साइप्रसको छाया लामो गरीएको छ (1948)
यो पनि दिन हो (1949)
मेरो मूर्तिपूजक छोरा सिसि (1953)
हन्टरको डायरी (१९५५)
एक आप्रवासीको डायरी (1958)
रातो पात (1959)
मारियो संग पाँच घण्टा (1966)
बहिर्गमनको दृष्टान्त (1969)
विद्रोही राजकुमार (1973)
हाम्रा पुर्खाहरूको युद्ध (1975)
Señor Cayo को विवादित भोट (1978)
पवित्र निर्दोष (1981)
एक स्वैच्छिक sexagenarian बाट पत्रहरू (1983)
नायक काठ (1987)
खैरो पृष्ठभूमिमा रातोमा लेडी (1991)
एक सेवानिवृत्त को डायरी (1995)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » विधर्मी
Cecilia Meireles। उनको जन्म जयन्ती